Isikhokelo esihle sokuqonda kunye nokuphucula i-Wi-Fi yakho yasekhaya. | IPhone iindaba
Isikhokelo esikhulu sokuqonda uqhagamshelo lwakho lwe-Wi-Fi kwaye usibeke kwinqanaba le-iPhone yakho, iMac kunye nezinye izixhobo.
UJuan Colilla | | IPhone iindaba, Iimveliso ze-Apple, Izifundo kunye neencwadana, Ezahlukeneyo
Masiyivume, ngaphandle kokuba uhlala kwisixeko esikhulu okanye kwindawo enabantu abaninzi, kunokwenzeka ukuba awuyonwabisi i-fiber optic ekhayeni lakho, kwaye nokuba uyayonwabela, yintoni eyona inokwenzeka kukuba umzila onikezwe ngumqhubi awukho kwinethiwekhi yakho, kuncinci izixhobo zakho zeApple.
Izixhobo ze-IOS kunye neMac ziphucule uqhagamshelo lwazo lweetshipsi ngaphandle kwesizukulwane, kangangokuba ukusukela kwisizukulwana sokugqibela bayayithobela imigangatho yamvanje yonxibelelwano ngaphandle kwamacingoSithetha ngokukodwa ngonxibelelwano lweWi-Fi kunye nebhendi ye5GHz ngomgangatho we802.11ac.
Njengoko sibona kule nkcazo, ukuqala nge-iPhone 6 kunye ne-6 Plus, owona mgangatho wanamhlanje waqala ukuxhaswa. 802.11acNangona kunjalo le iqhinga kwaye ayikabikho kude kube zii-iPhone 6 kunye nee-6s Plus (kunye nee-iPads ezivela kwi-Air 2) apho iye yazisa khona Itekhnoloji ye-MIMO (Input Multiple Output Multiple) ephucula kakhulu isantya apho ukuhanjiswa kwedatha kungafikelela khona ngokuba nee-eriyali ezahlukeneyo zokuthumela nokwamkela iipakethi ngaxeshanye.
Ngokubanzi, ngaphandle kokuba uhlala kwindawo efana nale bendiyichazile ngaphambili, kunokwenzeka ukuba umzila wakho ungasasazi nakwibhendi ye-5GHz, oku kukwathetha ukuba ayizukuhambelana nomgangatho we-802.11ac, yiyo loo nto kakhulu ngekhe ubenako ukonwabela esona santya siphezulu siphezulu singenazingcingoKungenxa yoko le nto kweli nqaku sichaza itekhnoloji nganye ngenqaku kwaye ngawaphi amanqaku ekufuneka uwaqwalasele xa uthenga umzila.
1 Ithetha ntoni loo nto ngeqela eliphindwe kabini? 2'4Ghz okanye i-5GHz
1.1 Ukuhamba rhoqo kwe-2GHz
1.2 Ukuhamba rhoqo kwe5GHz
2 Ngoku kukumgangatho we-Wi-Fi, 802.11 yintoni?
3 Ukwenza uphawu, imizila yokulwa
3.1 Ukwenza i-Beamforming ayinguye wonke umntu
3.2 Izibonelelo zokwenza i-beamforming
3.3 Iimpawu zokwenza uphawu
4 I-NAS (iNethiwekhi eGcinelwe ukuGcina)
5 I-Smart QoS, mhlawumbi eyona nto ixabisekileyo
5.1 Ukubekwa phambili kwezithuthi:
5.2 Ubuncinci isiqinisekiso sebhendi:
6 Izigqibo zokugqibela
7 Ii-routers ezicetyiswayo
Ithetha ntoni loo nto ngeqela eliphindwe kabini? 2'4Ghz okanye i-5GHz
Kuqhelekile ngokupheleleyo ukuba amanani kunye noonobumba abaninzi badityanisiwe, zombini 802.11 a / b / g / n / ac, kakhulu MIMOYA kwaye zininzi GHz Masigqibe ngobumdaka kwaye abo bakuqondayo okuncinci bakhathazekile, kodwa konke oku kulula kunokuba kubonakala, ndiza kuzama ukuyicacisa ngendlela elula.
Ngaphambi kokuba siqale ukuthetha ngeebhendi ezikhoyo kunye neempawu zento nganye, kufuneka sazi ukuba zeziphi na iibhendi ze-Wi-Fi. Inkqubo ye- Iibhanti ze-Wi-Fi Zizinto ezenzeka rhoqo apho umthumeli ekhupha khona amaza e-Wi-Fi ukuba afunyanwe ngumamkeli, kuqhagamshelo kwibhanti eyenziweyo, bobabini umthumeli kunye nomamkeli kufuneka bahambelane nebhanti oyifunayo.
Kuya kufuneka ukuba ivakele njengeTshayina kuwe, akunjalo? Masithathe umzekelo; Kunokuthiwa idatha okanye iipakethi zedatha (ulwazi olujikeleza kwezi frequency, ngeWi-Fi yethu) zinokuthelekiswa neenqwelo moya, kwaye amabhendi ahlukeneyo okanye amaza athelekiseka nokuphakama kwendiza.
Ke masithi ibhendi ye-2GHz ukuphakama kwendiza kufutshane nomhlaba kwaye i-4GHz iphakame, kuthetha ntoni oku? Iinqwelomoya ezininzi ezindala azikwazi ukubhabha kubude obuthile (izixhobo ezininzi ezindala azihambelani nebhendi ye5GHz) ke kufuneka zibhabhe ezantsi xa zifuna ukuhamba, oku kuxubene nenyaniso yokuba iinkampani ezininzi zeenqwelomoya zinenqwelomoya ezindala (izindlu ezininzi kunye neenkampani zinee-routers ezisebenza kuphela kwibhendi ye-5GHz), oku kwenza ukuba indawo yokubhabha esezantsi igcwaliswe ziinqwelomoya kangangokuba kunzima ukubhabha ngaphandle kwengozi, nangona kunjalo, iinqwelomoya ezininzi zangoku zingafikelela kubude obukhulu (ezona zangoku izixhobo ziyahambelana nebhendi ye2GHz) kwaye zininzi iinqwelomoya ezibhabha apho, oku kuthetha ukuba zininzi iingozi ezimbalwa, yindawo engena moya apho iiplanethi zinendawo yazo kwaye azicaphukisi.
Mhlawumbi ubudidekile xa kuthelekiswa neenqwelo moya, ukubona ukuba emva koko ithiyori yokwenene kulula kuwe ukuba uyetyise; Uninzi lweemizila azikho mihla ngokwaneleyo ukuba zisasaze kwibhendi ye5GHz, oku kuthetha ukuba kwibhlokhi kungathi cwaka (ngaphandle kokubaxa) imizila engama-30 ekhupha amaza e-Wi-Fi rhoqo kwi-2GHz kwaye ngethamsanqa ezintathu zazo ziya kusasaza Kwibhendi ye4GHz (ngaphandle kokuba uhlala kwisixeko esikhulu apho ukufika kwefayibha kunyanzelise ukusekwa kweerutha zangoku) kwenzeka ntoni ke? Ewe, ezi zinto zingama-30 ze-Wi-Fi ziya kudala ukwanda kwebhendi, oku kungangqinwa ngokwenza iskena kunye neelaptop okanye i-smartphone kunye nokubona ukuba sinoluhlu olungapheliyo lweenethiwekhi ze-Wi-Fi eminwe yethu, njengoko kukho njalo uninzi lwezi nethiwekhi ziyaphazamisana zibangele ukuphazamiseka kwaye, kwiimeko ezininzi, ukulahleka kwemiqondiso yamanqwanqwa (ukungazinzi kwinethiwekhi).
Kungenxa yesi sizathu ukuba ibhendi ye5GHz ixabiseke kakhulu, yibhanti okwangoku enezongezo ezimbalwa, kodwa kukuba ii-routers ayizizo zodwa ezisasaza kwibhendi ye-2GHz, iifowuni eziphathwayo kunye nkqu microwaves khupha imiqondiso kule frequency, oku kuthetha ukuba ukuba usebenzisa i-microwave, izixhobo ezikufutshane nayo ziya kuba nobunzima obukhulu ekufezekiseni unxibelelwano oluzinzileyo kunye ne-router, kwaye oku ngaphandle kwento yokuba umzila ungasasaza kwijelo ezili-11 ezahlukeneyo Ibhendi ye-2GHz (kunokuthiwa ziziindawo eziphakamileyo ngaphakathi kwendawo yomoya), ngaphandle koku kwaye umzila wethu utshintsha amajelo ngokuzenzekelayo ukunqanda uphazamiseko, ayizukuphela kwendlela eyenzayo, ke siyaqhubeka kuzo kwaye zijikelezwe zizixhobo ezisasaza kwibhendi ye-4GHz.
Kwelinye icala, iqela le 5GHz hayi kuphela uzinzo olukhulu ukuphazamiseka okuncinci, kodwa kuyayixhasa isantya esiphezulu yokuhanjiswa kwedatha, ngelixa ibhendi ye-2GHz ixhasa ubuninzi be-4Mbps kumgangatho wayo wangoku, ibhendi ye-450GHz inakho ukufikelela kwisantya sokudlulisa se-5Mbps, ngaphezulu kokuphindwe kabini, ngokungathandabuzekiyo ukuphucuka okubonakalayo xa kuthelekiswa nelinye ibhendi enenzuzo yokungabinangxaki yokungenelela kwimicrowave okanye ezinye izixhobo.
Nangona kunjalo ayizizo zonke izinto zegolide, Ibhendi ye5GHz inoluhlu olufutshane kakhulu kwaye kunzima kakhulu ukungena kwimiqobo efana nodonga, kunokuthiwa phantsi kweemeko ezifanayo, igagasi elikhutshwe kwibhendi ye-5GHz ine-1/3 yoluhlu lwento enye ekhutshwe kwibhendi ye-2GHz, oko kukuthi, ezona ndlela zicetyiswayo kule mihla kukusebenzisa izixhobo ezihambelana ne- «Dual Band».
Ke, izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zebhendi nganye zezi zilandelayo:
Ukuhamba rhoqo kwe-2GHz
Iyahambelana noninzi lwezixhobo ezindala kunye nezintsha.
Ukungena okuhle kwimiqobo.
I-eriyali zabo zihlala zitshiphu.
Uninzi lokuphazamiseka, nkqu nakwizixhobo zasendlini.
Isantya sokuhambisa idatha kancinci.
Ukuhamba rhoqo kwe5GHz
Isantya sokudlulisa phezulu.
Ungenelelo oluncinci, aluchaphazeleki kwizixhobo zasendlini.
Ububanzi bebhendi enkulu.
Ukungena kancinci kwezithintelo zomzimba.
I-eriyali zabo zihlala zibiza kakhulu.
Ukuhambelana nezixhobo ezitsha (umzekelo, ukusuka kwi-iPhone 5 okanye ngaphezulu).
Ngoku kukumgangatho we-Wi-Fi, 802.11 yintoni?
Apha sinemigangatho eyahlukeneyo, nganye intsha kunaleyo yangaphambili, kunye nezibonelelo kunye nezinto ezingalunganga, ezinye ezintsha zihambelana ngasemva ziyahambelana Ngezixhobo ezenzelwe abantu abadala, abanye basebenzisa ibhendi ye-2GHz, abanye ibhendi ye4GHz kwaye kukho ezinye ezisebenzisa zombini (eyokugqibela ibizwa ngokuba yiDual Band), kukho ezingama-5 zizonke, siza kuzijonga zonke ngokulandelelana kwazo , ukusuka kweyona indala ukuya kweyona mihla.
Ngo-1997, iZiko lobuNjineli boMbane nezoMbane (IEEE ngesiNgesi) lenze umgangatho wokuqala wetekhnoloji ye-Wi-Fi, le nto yafumana igama elingu-802.11 ngokubhekisele kwiqela elalijongene neprojekthi, ngelishwa, lo mgangatho mdala kangaka isantya sokudluliswa kwedatha esiyi-2 Mbps, okanye ngokucacileyo ngakumbi ukuze nonke niyiqonde, ilingana ne-0MB / s, kuba i-25 Mbps ilingana no-1MB / s, kuzo zonke iifom esiya kuzisebenzisa kule ndlela yokugqibela. ukulinganisa ukwenza kube lula kuwe ukuba uqhelane nombono.
Ngo-1999 i-IEEE iwandisile umgangatho ukuya kwelitsha elibizwa ngokuba yi-802.11b, lo mgangatho mtsha usebenzise ibhendi engalawulwa ye-2GHz ifikelela kwisantya esiphezulu se-4MB / s, into efana nonxibelelwano olukhulu lwentambo namhlanje.
Lo mgangatho ucinga ukuncitshiswa kweendleko xa usebenzisa ibhendi engalawulwa ye-2'4GHz, nangona kunjalo oku kubangela ukuphazamiseka kwiifowuni eziphathwayo, izixhobo ze-microwave okanye nasiphi na esinye isixhobo esisebenzisa le frequency, oku kuphazamiseka kunokuthintelwa ngokubeka isiginali ye-Wi-Fi indawo yokukhutshwa kwindawo ecwangcisiweyo nephakamileyo.
Imiqobo inokuthintelwa ngokulula ngokubeka i-router kakuhle.
Izixhobo zasendlini zinokuphazamisa umqondiso xa usebenzisa ibhendi ye-2GHz.
Lo mgangatho wenziwa ngaxeshanye ne-802.11b, yayiyeyokuqala ukusebenzisa ibhendi ye-5GHz elawulwayo, nangona oko kubandakanya iindleko eziphezulu kwaye ayenzi ukuba ingathandwa njenge-802.11b.
I-802.11a yakhutshelwa kwimeko zeshishini, ibhendi yayo inyuka yaya kuthi ga kwi-6MB / s, isantya esikhulu, ngaphandle koku yayiyi-75b eyaphela iphethe amakhaya ethu.
Isantya sokuhambisa idatha ephezulu (6MB / s okanye into efanayo, 75 Mbps).
Njengoko ibhendi ye5GHz iyi-band elawulwayo, ukugcwala kwayo ngezinye izixhobo ezingagunyaziswanga kuyathintelwa.
Ubunzima obukhulu bokungena ngaphakathi.
Ngo-2002 nango-2003 umgangatho omtsha obizwa ngokuba yi-802.11g wakhutshwa, wadibanisa eyona nto ingcono nge-802.11b kunye ne-802.11a, 802.11g ixhasa umda wokuhamba ukuya kuthi ga kwi-6MB / s kwaye isebenzise ubude be-75 '2GHz ukufezekisa Uluhlu olukhulu kunye nokungena kwemiqobo, lo mgangatho ukwangasemva uhambelana ne-4b, oku kuthetha ukuba izixhobo eziyilelwe loo mgangatho mdala ziyahambelana nale intsha ngaphandle kwesidingo sokuguqula nantoni na.
Sebenzisa ibhendi ye-2GHz ibonelela ngokoluhlu olukhulu kunye nokungena.
Isantya esiphezulu ukuya kuthi ga kwi-6MB / s.
Ukubuyela umva kokuhambelana ne802.11b.
Iindleko eziphezulu kune-802.11b.
Ungenelelo ngenxa yokugcwaliswa kwebhendi.
Ukuphazamiseka kwizixhobo zombane okanye ezinye izixhobo.
Umgangatho we-802.11n ukwaziwa ngegama lika "Wireless N", oku kuphucule isantya okanye ibhendi yangaphambi kwayo ngokufaka itekhnoloji ye-MIMO (Multiple Input Multiple Output ngesiNgesi), le teknoloji isebenzisa ngaphezulu kwe-eriyali enye ukuya kwi thumela kwaye ufumane iipakethi zedata ngaxeshanye, ukuthintela ukulahleka kwezinye kwaye ekugqibeleni uphucule ubungqongqo benethiwekhi.
Ngo-2009 kwagqitywa ukuba lo mgangatho unokufikelela kwisantya sokuhambisa se-37MB / s. Lo mgangatho ubuyela umva uyahambelana ne-5b kwaye usebenzisa ibhendi ye-802.11GHz engalawulwa.
Isantya esiphezulu kakhulu.
Ukuqina okuphezulu ngenxa yokusetyenziswa kwee-eriyali ezininzi.
Iindleko ziphezulu kunemigangatho yangaphambili.
Iinethiwekhi ezisekwe kwi-802.11g kunye ne-802.11b zinokuphazamisana nomqondiso wayo.
Izixhobo okanye ezinye izixhobo ezisebenzisa ibhendi ye-2GHz zinokubangela uphazamiseko.
Lo ngowona mgangatho mtsha, usebenzisa i-Dual Band kunye ne-MIMO technology ngaxeshanye, ifikelela kwisantya se-162'5MB / s kwi-band ye-5GHz kunye ne-56'25MB / s kwi-2'4GHz band, ibuyela umva iyahambelana 802.11b, g kunye n nemigangatho.
Ukuhambelana nokubuyela umva kunye nemigangatho yakudala kuvumela izixhobo ezindala ukuba zisebenzise (ngaphandle kokuzonwabela zonke izibonelelo zazo) zalo mgangatho.
Elona bandwidth lihamba phambili okanye isantya sokuhambisa idatha kuwo omabini amabhande
Ukusetyenziswa kwetekhnoloji ye-MIMO kuvumela ukomelela kwenethiwekhi okukhulu.
Inokudityaniswa kwesantya, uluhlu oluhle kunye needigri ezahlukeneyo zokungena kwemiqobo kunye nokuphazamiseka kuxhomekeke kwibhanti esidibanisa kuyo (kukho ii-Wi-Fi ezi-2 ezahlukeneyo, ibhendi nganye).
I-Dual Band MIMO ichaza ixabiso eliphezulu.
Ibhendi ye-2GHz isachatshazelwa ziimpawu zayo zokuphazamiseka.
Ibhendi ye5GHz ayinalo uluhlu olulinganiswa nolwe-2GHz.
Ukwenza uphawu, imizila yokulwa
El Ukuhlengahlengisa Itekhnoloji ethi, eneneni, ivumele ukusetyenziswa ngokukuko kwee-eriyali zeWi-Fi. Ii-routers ezenza i-beamforming ziya kuba nakho ukwazi indawo yezixhobo eziqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-Wi-Fi kunye gxila kumqondiso kubo endaweni yokukhupha i-omni-directional wave kwaye uyilinde ukuba ifike kumthengi.
Ukukunika umbono, i-eriyali ngaphandle kokwenza i-beamforming inokuthelekiswa nebhalbhu yesibane kunye neyokwenza i-laser, xa ibhalbhu yokukhanyisa ikhanyisa ngokufanayo yonke into eyirhangqileyo, ikhupha ukukhanya macala onke, i-laser, nangona kunjalo, igxila kuyo Isibane sokukhanya ngokuthe ngqo kwindawo esijolise kuyo.
Ukwenza i-Beamforming ayinguye wonke umntu
Obu buchwephesha baziswa ngomgangatho we-802.11n, nangona kunjalo xa i-IEE yayenzayo, ayichazanga ukuba ukusetyenziswa kwale teknoloji kufuneka kusetyenziswe njani ngalo mgangatho, ngenxa yoko uninzi lwezixhobo (iirouters kunye nabamkeli) zavela kwintengiso ngeendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa i-beamforming, isiphoso kukuba ezi ndlela azisebenzi kunye, ngenxa yoku kufuneka ube ne-router kunye nesixhobo esiphumeze indlela efanayo yokwenza izinto ukuze ihambelane, kungenjalo iya kuba ube njengothungelwano oluqhelekileyo lweWi-Fi.
Ngethamsanqa, i-IEE ayenzanga mpazamo inye kumgangatho omtsha we-802.11ac, ngoku kukho izikhokelo ezimiselwe ukulandela ngabavelisi abafuna ukusebenzisa le teknoloji kwizixhobo zabo, ngale ndlela, zonke izixhobo ziyahambelana ngokusebenzisa indlela efanayo yokuguqula.
Izibonelelo zokwenza i-beamforming
Enkosi ngokwenza i-beamforming, sifumana umqondiso wethu wokugxila kwisixhobo okanye izixhobo ezizisebenzisayo, oko ke kunciphisa ukubambezeleka kunye nokunyusa uluhlu loqhagamshelo.
Iimpawu zokwenza uphawu
Sizibonile izibonelelo zale teknoloji kwaye ngokuyinene yintoni, kodwa kukho iimfihlo ezingaphaya kwayo, umzekelo, ayizizo zonke izixhobo ezisebenzisa umgangatho we-802.11ac ziyahambelana nokwenza i-beamforming, ziindlela ezisebenza ngokubanzi Ungayisebenzisa le teknoloji.
Ayingabo bonke abafumanayo abanokuxhamla ngokupheleleyo kuyo, ngenxa yoku Kufuneka ube ne-chip ye-Wi-Fi exhasa i-MIMOUmzekelo, i-iPhone 6 ingafumana isiginali evela kumzila onokwenza uguquko kumgangatho we-802.11ac (i-iPhone 6 okanye ngaphezulu iyahambelana nalo mgangatho), nangona kunjalo i-iPhone 6 ayinakukhomba kwi-router, kufuneka ithumele iipakethi omnidirectional, oku kuyenzeka kuba i-iPhone 6 ayinakho ukwenza "i-beamforming", nangona kunjalo i-iPhone 6s okanye ngaphezulu, ezi iPhone kunye ne-iPad Air 2 zine-chip ye-Wi-Fi kunye netekhnoloji ye-MIMO ekuvumela ukuba ubusebenzise ngokupheleleyo obu buchwephesha.
I-NAS (iNethiwekhi eGcinelwe ukuGcina)
Ezinye iirouthi zibandakanya izibuko le-USB, ezinye zine-hard drive ngaphakathi, ezi zixhasa ii-routers okanye zibandakanya ukusebenza kwe-NAS, oku kuthetha ukuba ungaqhagamshela isixhobo sokugcina kwaye uyisebenzise ukude.
Umzekelo, ezinye ii-routers ezisebenza ngokuphezulu zibandakanya i-hard drive ngaphakathi kwaye ikuvumela ukuba wenze izinto kude kube ngoku akukho mntu wayenokucinga nge-router, enje:
Umatshini wexesha: Nge-Mac, unokumisela i-network hard drive ukuze isebenze njengeMatshini yeXesha, yiyo loo nto ikwenze ukuba iMac ikwazi ukwenza iikopi zayo ezigcinayo kule hard drive ngokuzenzekelayo nangaphandle kweentambo.
Ukugcina kude: Singayisebenzisa le hard drive njengokugcina kude, ewe isantya sokufunda / sokubhala asizukuncitshiswa kuphela zizixhobo zokugcina kodwa nakwisantya seWi-Fi okanye inethiwekhi eneentambo, nangona kunjalo sinokudlulisa iifayile ezinjengeefoto okanye iividiyo kule nethiwekhi hard drive kwaye uzibuke nakwesiphi na isixhobo (njenge-smartphone okanye umabonwakude) ngaphandle kokuzikhuphela.
Umphathi weT Torrents: Ezinye ii-routers zide zivumele ukuba nomphathi wesikhukula, le yimeko ye Xiaomi Smart umzila 2 evumela ukuba uthumele imilambo kwi-router kwaye uyikhuphele kwisixhobo sakho sokugcina ngaphandle kokusebenzisa esinye isixhobo esisebenzayo.
Umncedisi we-FTP: Ezi zixhobo zokugcina zinokuqwalaselwa ukuba zifikeleleke naxa ungekho ekhaya, ukuba nje i-router yethu inonxibelelwano lwe-intanethi, isixhobo esigciniweyo siza kuba naso, ukuze sibe nenkonzo yokugcina isantya esiphezulu kwi-intanethi (emiselwe ngumgangatho uqhagamshelo olunekhontrakthi) ngexabiso esilifunayo (kumiselwa yindawo yokugcina kunye neendleko zesixhobo) kunye nendawo esiyifunayo.
I-Smart QoS, mhlawumbi eyona nto ixabisekileyo
I-QoS sisifinyezo se Umgangatho weNkonzo (Umgangatho wenkonzo ngeSpanish), le yinto ebaluleke kakhulu kumakhaya apho kukho iiprofayili zomsebenzisi ezahlukeneyo.
Umzekelo, ukuba unelungu losapho elisendlwini elidlala imidlalo yevidiyo ekwi-intanethi, omnye uhlala ebukela iinkonzo ezininzi zokuhambisa ividiyo ezinje ngeYouTube okanye iNetflix kunye / okanye omnye osebenzisa iinkqubo zesikhukula, uya kuhlala imeko yamakhaya amaninzi apho unxibelelwano ludala iingxaki phakathi kwabasebenzisi.
Iingxoxo ezininzi zinokuphela ngokubandakanya isixhobo esibandakanya i-Smart QoS, oku kusebenza kungathatha amanyathelo malunga noku njengokubeka phambili ukugcwala kwezithuthi kunye / okanye isiqinisekiso sobuncinane bebhendi, ukuze uyiqonde ngcono ndiza kukucacisela:
Ukubekwa phambili kwezithuthi:
Si umsebenzisi udlala umdlalo online njani ukuba yiLigi yamaNqaku kunye nokubukela iividiyo kwiYouTube okanye kwiNetflixAba basebenzisi babini bazakube besungula ukugcwala ngokusebenzisa umzila, kwimeko yokungabinayo iQoS le router iya kuthumela idatha eyimfuneko kwi-intanethi njengoko ifika, ngaphandle komyalelo ophambili. Nangona kunjalo, le yimisebenzi emibini eyahlukeneyo, umdlalo okwi-Intanethi ufuna i-latency ephantsi, oku kuthetha ukuba iipakeji kufuneka zifike ngokukhawuleza kwiseva kwaye zibuyiswe ngesantya esifanayo, umdlalo kumdlalo weLigi yeLegends kunye nexesha eli-1 ngeyure Ingabandakanya inkcitho ye-70MB kuphela, nangona kunjalo iYouTube okanye iNetflix iividiyo zokusasaza azifuni latency efanayo kodwa i-bandwidth kunye nesantya sokukhuphela, ezi vidiyo zisemgangathweni we-HD zinokuvelisa amakhulu e-MB okanye i-1 okanye i-2 GB yokusetyenziswa ngeyure, zimbini usetyenziso womnatha ofuna iimfuno ezahlukeneyo.
Ngokubekwa phambili kwezithuthi zendlela kunye ne-Smart QoS, umzila uyazi ukuba yeyiphi into eyenziwayo kunye nezinto eziyifunayo, ngaloo ndlela kuqinisekiswe ubuncinci bokulibaziseka komsebenzisi odlalayo (oya kumvumela ukuba alawule abalinganiswa bakhe ngexesha lokwenyani ngaphandle kokulibaziseka ) kunye ne-bandwidth eyaneleyo kunye nesantya sokukhuphela somsebenzisi obukele ividiyo esasazayo (oya kuyonwabela ividiyo ngaphandle kweziphazamiso kwaye akazukuphazamisa umsebenzisi wokuqala).
Ubuncinci isiqinisekiso sebhendi:
Ezi meko zingenzeka kunye nezinye iintlobo zabasebenzisi, njengomsebenzisi obukela ukusasaza iividiyo kunye nomnye okhuphela iifudlana, umsebenzisi wokuqala (kwimeko yokungabinayo i-router ene-Smart QoS) uya kubona ukuba iividiyo zabo azilayishi kakuhle kwaye Unengxaki yokuphumla ngenxa yokuba umsebenzisi wesibini echitha yonke i-bandwidth xa ekhuphela imisinga, oku kuthelekiswa nendlela, ibanzi indlela, iimoto ezininzi ziya kuba nakho ukudlula ngaxeshanye (i-bandwidth), ngaphandle kwe-Smart QoS Akukho mntu uthi imoto ingadlula apho, ingafana nohola wendlela ongalawulwa.
Enkosi kwi-Smart QoS kunye nesiqinisekiso sayo somda wokuhamba, i-router enalo msebenzi iya kunika ubuncinci bandwidth kumsebenzisi ngamnye, lo msebenzisi uya kuba nenxalenye yendlela ekhuselekileyo ukuze iimoto zabo (iipakethi) zidlule kuyo ngaphandle komnye umsebenzisi zinokuhlasela Imizila, ngale ndlela kuyaqinisekiswa ukuba wonke umntu uyakudlula kwaye akukho namnye ongena kumgaqo wolunye.
Ngalesi sikhokelo uya kuba ukulungele ukuhlalutya imeko ekhayeni lakho okanye kwindawo yokusebenzela, cinga ngonxibelelwano olwenzileyo, jonga ukuba i-router yakho ifike kule nto kwanezixhobo zakho (nokuba awunayo i-fiber optic router elungileyo ukuphucula kakhulu uqhagamshelo lwakho ngokwenza ngcono imisebenzi efana nokusasazwa kwe-AirPlay, ukulawula ukhuphelo lweTorrents, iYouTube kunye neeseshoni zomdlalo okwi-Intanethi ukuze abanye bangaphazamisi abanye okanye baphucule ukufikelela kwenethiwekhi yakho kwiindawo zendlu kwezo bezize ngaphambili ngokungacacanga. ).
Iinkcukacha ezibalulekileyo nazo ekukhetheni umzila zinokuba njalo iprosesa kunye ne-RAM efakiweyo, ndiyazi ukuba oku kungavakala ngathi kuyabaxwa kodwa iprosesa engcono i-router inayo, kokukhona iya kuba nakho ukwenza izigqibo malunga nokugcwala kwabantu okugqitha kuyo, kwaye ngakumbi i-RAM inayo, iipakethi ezingaphezulu ezinokugcina ukuze zikwazi thumela enye emva komnye ngaphandle kwabasebenzisi bebona unxibelelwano lwabo lucothoza.
Umcimbi unokuba nzima, nangona kungenjalo, isitshixo kukujonga i-router esemgangathweni ngexabiso elifanelekileyo, akukho mfuneko yokuthenga ikhompyuter ephezulu elawula unxibelelwano lwekhaya lakho, nangona kunjalo umzila ombi ungalonakalisa kakhulu ulwazi lwakho lomsebenzisi.
Kwi-intanethi unokufumana ii-routers ezilungileyo ezihambelana nemigangatho yoqhagamshelo lwamva olungenazingcingo, unayo i-NAS okanye iyahambelana nayo kwaye inee-eriyali ezininzi kunye nomsebenzi we-Smart QoS, ingxaki kukuba ii-routers ezininzi zale ndlela zihlala inzima ukumiselaAbanye bade babe nee-eriyali zeedummy ezingekho nakwisiqingatha sobungakanani beplastiki ebenza babone (bevula ii-eriyali ezininzi baye babonisa ukuba bangaphantsi kwama-50% kwinto abahlala kuyo).
Abanye imizila endiyincomayo Zizo:
Xiaomi Mi Wifi 2 - € 30- Eyona ndlela ibiza ixabiso eliphantsi ye-NAS 802.11ac MIMO Wi-Fi router onokuyifumana, iphefumlelwe yiMagic trackpad ka-Apple, iya kulonwabela naluphi na unxibelelwano lwasekhaya. Zonke iirouta zeXiaomi zibandakanya usetyenziso lwe-iOS kunye ne-Android kunye nesixhobo esibonakalayo esilula.
I-AirPort Express - € 109 - I-router yexabiso eliphantsi lika-Apple, ngaphandle kokuba inemisebenzi ephelelwe lixesha kunale yeXiamo Mi Wifi 2, kukho abantu abangakulungelanga ukuthenga iimveliso ezinje ngeXiaomi, ngeli xesha sine-router ehambelana nomgangatho we-802.11n, owoneleyo amakhaya amaninzi, ngaphandle kokuhambelana kweNAS.
Xiaomi Smart umzila 1 (1TB) - € 124 - Isizukulwana sokuqala se-Xiaomi's advanced router, eyokuqala kuluhlu ebandakanya i-NAS ngokungagqibekanga, ine-slot ezantsi ukudibanisa i-hard drive (ibandakanya i-1TB enye) kwaye iyahambelana nokwenza i-beamforming, imigangatho eyi-802.11ac kunye neSmartQoS.
Xiaomi Smart umzila 2 (1TB) - € 150 - Iqhubele phambili ngakumbi kunangaphambili (eyona ilungileyo kwimbono yam) kunye ne-1TB eyakhelwe-ngaphakathi kwi-NAS, le router iyahambelana nomgangatho we-802.11ac, iteknoloji yokwazisa, umphathi we-torrent, i-Smart QoS, i-backups ezenzekelayo nokunye okuninzi ...
Umoya oMkhulu kakhulu - € 219 -Iyona ndlela ihamba phambili ye-Apple ye-NAS (engafakwanga), ehambelana nomgangatho we-802.11ac, ukwenza i-beamforming, inee-eriyali ezi-6 zizonke kwinkqubo ye-3X3 MIMO (3 ye-2GHz kunye ne-4 ye-3GHz), izibuko le-USB 5 kunye Isicelo se-smartphone.
Ixesha leCapsule eliGqithisileyo (2TB) Ngokwenyani, yi-AirPort Extreme ene-hard drive eyakhelweyo kwi-329TB eya kukuvumela ukuba wenze umatshini weXesha laseKhaya ngenethiwekhi yakho ye-Wi-Fi, ukuze wenze i-backups ezenzekelayo yeMac yakho ngokulula kwaye ngaphandle kweentambo .
Xiaomi Smart umzila 2 (6TB) - € 539 -I-Xiaomi router efanayo kuhlobo lwayo lwe-6TB, kwelona lifunwa kakhulu kwaye lifuna ukusingatha zonke iividiyo, iimuvi, iifoto, iikopi zokulondoloza kunye nezinye ezikulo mzila.
#Phawula: Zonke iirouta zeXiaomi zinesoftware esekwe I-OpenWRT, Inguqulelo yeLinux yeerutha. Kukho iapp ebizwa ngokuba yi Wifi yam kwi-AppStore kunye neGoogle Play esetyenziselwa ukumisela kwi-smartphone okanye ithebhulethi yethu kwaye iyafumaneka ngesiNgesi (kwi-Android kukho inguqulelo yeSpanish eguqulelwe luluntu kwiforum ye-MIUI), ujongano lwewebhu lwale mizila lufumaneka kuphela kwi IsiTshayina Ngaphandle koku, ukuba siyifumana kwisikhangeli seGoogle Chrome sinokuyiguqulela kwiSpanish ngokugqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Isikhokelo esikhulu sokuqonda uqhagamshelo lwakho lwe-Wi-Fi kwaye usibeke kwinqanaba le-iPhone yakho, iMac kunye nezinye izixhobo.
Inqaku elilunge kakhulu elinolwazi kunye nomgangatho, kodwa kuphakama umbuzo: ngezixhobo ze-iOS, ndikwazile ukwazi isantya sonxibelelwano lwam lwe-Wi-Fi, kunye nesicelo somoya semizila yeApple. Ngaba ikhona indlela yokwazi isantya sonxibelelwano lwe-Wi-Fi, kunye nee-routers ezingenasicelo sithile? Imibulelo emininzi.
UJuan Colilla sitsho
Ndiyoyika ukuba ekuphela kwento onokuyenza kukukhangela i-Intanethi kwimodeli ye-router ofuna ukuyifumana, ngamanye amaxesha ibonakala kuqwalaselo lwewebhu, kodwa ngamanye amaxesha hayi, kwaye kwezo meko akukho ndlela yokwazi ngokuqinisekileyo inokuthenjwa kunokukhangela iwebhusayithi yomenzi okanye ezinye ezibonelela ngolwazi malunga nesixhobo ... kuba ndiyayiqonda ukuba uthetha ukufumana umgangatho esiwusebenzisayo.
Phendula kuJuan Colilla
enkosi, andithethi mgangatho, kuba ndiyazi ukuba zombini i-router kunye ne-iPhone yam zi. C., Kwaye ndinxibelelana neqela lesihlanu le-gigahertz. Kwenzeka ntoni ngaphambi kokuba ndisebenzise iAirPort ngokugqithileyo, kwaye ngesicelo seAirPort ndibone lonke uqhagamshelo lweWi-Fi kumzila, kunye nesantya kwii-mega byte ngomzuzwana Inyani yile yokuba i-jazztel indinike umzila omtsha, ukusuka Umgangatho ongu-802.11 ukuya ku-C kodwa andinandlela yokuqinisekisa isantya sekhonkco le-Wi-Fi phakathi kwe-iPhone kunye ne-router, ke bendibuza ukuba uyazi nasiphi na isicelo esindixelela isantya sonxibelelwano phakathi kwe-router kunye ne-iPhone . imibulelo emininzi.
Ndingatsho ndisisidenge, kodwa ... awungekhe uqhagamshele kwisikhululo seenqwelomoya ngokugqithileyo emva kwendlela yeJazztel? Oku kunokukunika iinkonzo onazo neAirPort, akunjalo? Unganokudibanisa iAirPort kwenye indawo kude kude nendlu apho ikhebula inokufika kwaye yonyuse uluhlu lweWi-Fi ejikeleze indlu, akunjalo?
Ewe, andazi ukuba umzila "unokuphithizela" omnye kwaye siya kuba sizikhohlisa.
Phendula kuJose Luis
Kulungile, iAirPort andisenayo, enokuba sisisombululo nangona kunjalo kwaye andinakuze ndikwazi ukulinganisa isantya sokwenyani soxhumano lwam lweWi-Fi. Kuya kufuneka ndidibanise ikhompyuter yeWindows kumzila ukuze undinike isantya sokwenyani soxhumano lwam lweWi-Fi.
Umhlobo okhohlakeleyo, inqaku elilungileyo.
Enkosi kakhulu hope ndiyathemba ukuba ikuncedile!
Ewe, andazi nokuba i-router enye "inokuphithizela" enye kwaye siya kuba siyabhanxa.
Enkosi ngeli nqaku. Gqibezela kwaye ucace gca. Ukubulisa
Elinjani inqaku elilungileyo kunye nokugxeka ngaphezulu kwenqaku elinye kweli phepha, kulungile ukuthi xa bekhulu. Ndiyavuyisana nawe mzalwana ngomsebenzi omkhulu. Ukubulisa
UPedro Ruiz sitsho
Ukuphononongwa ngokugqwesileyo kwesihloko. Kuya kufuneka uyipapashe kwimagazini eneempembelelo eziphezulu kuba igqibelele ngokwenene. Imibuliso evela eMexico.
Phendula kuPedro Ruiz
Ukugqwesa, inqaku elinjalo lomgangatho laphoswa kule webhusayithi
UDiego Villa sitsho
Umxholo obonakala unzima, uwuchaza ngeeapile kwaye kuyacaca, enkosi, inqaku elilungileyo
Phendula u-Diego Villa
USergio Cruz  sitsho
Inqaku elihle. Ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho kwaye wabelane ngalo.
Phendula uSergio Cruz 
Okokugqibela umntu uchaza into enzima ngendlela elula kodwa ngobungqongqo nobunzulu. Undikhuphe kumathandabuzo amaninzi. Ungutitshala. Ndiyakuvuyela.
I-Apple yenza uyilo olukhulu ngokuhamba nge-A9X
Uyilungisa njani "Ukukhuphela kwakhona engafumanekiyo" kwiVenkile ye App